Samsung Galaxy Data Recovery: weghachite furu efu faịlụ na Samsung Galaxy
Samsung Galaxy Iweghachite: Olee naghachi-ehichapụ faịlụ na Samsung Galaxy
Ị nwere Samsung Galaxy Smart ekwentị? Samsung Galaxy Series bụ otu n'ime ewu ewu usoro nke smart igwe taa, na nso si ajụ ego flagship ụdị. Ugbu a, ọhụrụ S6 ụdị a tọhapụrụ nke bụ akụta a otutu anya na bụ na kpọmkwem mpi Apple si iPhone 6 na 6S.
Mgbe owning a Galaxy ekwentị nwere ike na-eche ịtụnanya, i kwesịrị na-elekọta gị ekwentị oke nke mere na ọ ruo na gị ruo ogologo oge. Dị ka igwe-eji na ndị agadi, otutu mbipụta pụrụ ibilite. Ọtụtụ nsogbu ndị na-ebilite ruru ka arọ ojiji na-enweghị ekwesị na-elekọta. Ka ihe atụ, ọ bụrụ na ị na-emechi ngwa ọdịnala na-agba ọsọ na ndabere, ọ na-erepịakwa ukwuu Ram, na-eduga na ngwaọrụ lagging na batrị ekpo oke ọkụ.
Nsogbu ọzọ bụ data ọnwụ. Samsung Galaxy ngwaọrụ nakwa hụrụ metụtara data ọnwụ. Ebe a na-atọ mere data ọnwụ etịbe ke ngwaọrụ.
1. Ọtụtụ n'ime ndị ntị ndị dabere na SD kaadị ruru ala esịtidem ohere. Ruru ka o mebie SD kaadị mgbe ekwentị ngwa ịkwụsị ọrụ na-eme ka isi data ọnwụ. SD kaadị ure etịbe ruru virus ma ọ bụ ihe rụrụ arụ software. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị wepụ a virus ma ọ bụ software, e nwere ezi ohere nke adịkwa gị mkpa data. Hardware malfunction pụkwara ime ka isi data ọnwụ. 2. Mgbe ụfọdụ na ngwa nwekwara ike ime ka ndị data ọnwụ. Ọtụtụ ngwa nwere ohere mwute data na anyị ekwentị dịka kọntaktị, ozi na ọtụtụ ndị ọzọ. 3. Mgbe ụfọdụ mmelite pụkwara ime ka data ọnwụ. Ọ bụrụ na, melite ada ada n'oge echichi, ekwentị gị malfunctions na na mgbake mode ekwentị gị nwere ike ida mkpa data.
Olee otú naghachi ehichapụ faịlụ site Samsung Galaxy ngwaọrụ
Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery) bụ mgbake software na inyere gị aka ịchọta furu efu data site na ngwaọrụ gị. Ị nwere ike wụnye ya na gị na kọmputa na jikọọ gị Samsung Galaxy ekwentị site USB. Ị nwere ike naghachi data dị ka ozi kọntaktsị, mgbasa ozi faịlụ wdg
Ị nwere ike naghachi data na kọmputa gị ma ọ bụ ekwentị. I nwekwara ike naghachi gị data si ígwé ojii na isi mmalite.
Ụdị nke data i nwere ike naghachi-agụnye photos, kọntaktị, SMS, akwụkwọ, na kalenda, na ndetu, ncheta, memos, ibe edokọbara na ọtụtụ ndị ọzọ.
Software-enyere gị aka agbake data, nke furu ruru factory nrụpụta, mmebi, okuku na ROM na-egbu maramara.
I nwekwara ike iji software ịrụzi gị android.
Ọzọkwa, ọ nwere atụmatụ na-enye gị ohere ịhụchalụ mgbake faịlụ.
Imewe nke software bụ kensinammuo, mfe iji na ọ na-eduzi gị na usoro ahụ.
Olee otú naghachi data si Samsung Galaxy ngwaọrụ ke nzọụkwụ
Nzọụkwụ 1. Wụnye software na ẹkedori ya na ekwentị gị. Ozugbo software bụ na, jikọọ ekwentị gị na kọmputa na-ka software ịchọpụta na ekwentị gị.
Nzọụkwụ 2. Ugbu a gaa Malite iṅomi iji malite usoro. Software ga iṅomi site ngwaọrụ gị. Ozugbo Doppler zuru ezu na ọ ga-depụta data i nwere ike naghachi ngwaọrụ gị. Ị nwere ike ịlele ekpe panel-eme ka n'aka data na-ticked.
Nzọụkwụ 3. Site n'elu ị nwere ike chọọ na data ị chọrọ iji naghachi kpọmkwem. Ị nwere ike Toggle nhọrọ ịhụ ehichapụ data. Ugbu a dị nnọọ pịa naghachi na-amalite naghachi usoro.
Gịnị ma ọ bụrụ na Samsung Galaxy ngwaọrụ bụ na mgbake mode?
Mgbake mode-enyere gị aka jikwaa ekwentị site na mgbọrọgwụ. Otú ọ dị, mgbe femụwe mmelite ekwentị wee rapaara n'ime anya ruru na-ezighị ezi update nwụnye. Ekwentị na-eme na-amalite na mgbake mode na mkpọka si. Ebe a bụ otú ị nwere ike idozi mgbake mode nke:
Chọrọ: Odin, femụwe obere faịlụ, USB na kọmputa.
Nzọụkwụ 1. Open Odin software na kọmputa gị na-ahapụ ndabara ntọala dị ka ọ bụ. Ugbu a tinye akara PDA faịlụ na bulite femụwe tar faịlụ.
Nzọụkwụ 2. Malitegharịa ekwentị gị na ekwentị na download mode. Ị nwere ike ịchọta nri button Nchikota na. Ọ na-adịkarị ike na olu bọtịnụ. Jikọọ na ngwaọrụ gị na kọmputa. Ozugbo e jikọọ ekwentị ị ga-ahụ ID: com n'aka acha odo odo.
Nzọụkwụ ndị a nwere ike mfe inyere gị aka gbochie data ọnwụ. Echegbula onwe gị banyere data ọnwụ ọ bụla ọzọ, na-eji Wondershare taa!
Step3. Ugbu a dị nnọọ pịa Malite bọtịnụ ma ka zuru ezu usoro imecha na ekwentị gị ga-akpaghị aka rebooted na mgbake mode na dị nnọọ Malitegharịa ekwentị gị na ekwentị. Ọ ga-akpaghị aka na-amalite.
Hot Samsung Galaxy ngwaọrụ
Galaxy ka ulo oru ọhụrụ igwe ke nsonso na mma aghụghọ na emelitere atụmatụ. E na A bụ ndị ọhụrụ sub-usoro ewebata na na Galaxy usoro. Ebe a na-n'elu 5 kacha ekpo ọkụ ugbu ekwentị na Galaxy usoro:
Ọ bụ ọhụrụ mbipụta ke nsonso na-abịa na sturdy metal ahu, ịtụnanya arụmọrụ na oké ihuenyo. Ọ bụ otu n'ime ndị lightest ekwentị ke nsonso.
New Edge atụmatụ Galaxy S6-eme ka ọ pụrụ iche na ekwentị na-enye gị bụghị nanị oké achọ ekwentị, ma ọ na-abịa na-eju onu atụmatụ.
Ọ bụ otu n'ime ọhụrụ midrange igwe na-enye ọhụrụ dara anya. Ọ bụ ọtụtụ slimmer na Mkpa ọkụ karịa aga na nkeji igwe.
Kwadoro na ike nhazi na ọhụrụ imewe nke Galaxy E usoro a ekwentị mkpanaaka na-enye oké ọrụ ahụmahụ.
A7 bụ otu n'ime ọhụrụ ụdị na dara ahu nke na-eweta ọhụrụ anya n'ihi na Samsung smartphones. Ọ bụ ebughibu, ìhè na-enye gị ịtụnanya arụmọrụ.
Otú nyefee Data si Sony ka Blackberry
> Resource> Android> Olee naghachi-ehichapụ faịlụ na Samsung Galaxy